Shina PP Spunbond lamba vita amin'ny lamba tsy miloko ho an'ny karazan'entana masker sy mpanamboatra | ShiningPlast
Nanamboatra sy namatotra ny lamba tsy vita amin'ny Polypropylene Spun-bond Nonwoven izahay tato anatin'ny folo taona lasa. Nandritra ny Epidemelina COVID-19, ny lamba PP Spun-bond tsy roa izay novokarina tao amin'ny orinasa izahay dia natambatra tamin'ny saron-tarehy rehetra sy ny faritra fisorohana areti-mifindra.
Ambany: 17,5cm, 19.5cm, 20cm, 25cm, 26cm na toy ny namboarina
Ny kalitao efa vita vita amin'ny PP spunbond tsy lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba no safidy tsara indrindra amin'ny famolavolana ny vokatra vita amin'ny saron-tarehy. Misy karazana lanja vita amin'ny lamba rehetra arakaraka ny filanao.
· Material 100% Polypropylene
· Teknolojia S, SS
· Width 17,5cm, 19.5cm, 20cm, 25cm, 26cm na toy ny namboarina
· Color Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
· Size 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max ho 100 '* 100'
· Fanontam-pirinty Hatramin'ny 4 loko
· Mampihetsi-po: Mampifofofofo ny akora vita amin'ny Polypropylene Spun-bond Nonwoven lamba ary ampiasaina amin'ny faritra saron-tarehy.
· Anti-Bakteria: afaka misakana ny fifindran'ny bakteria amin'ny alàlan'ny tenany izy.
· Malemy: Malalaka ny PP Spun-bond nonwoven lamba satria malefaka amin'ny mason-tarehy izay malefaka amin'ny hoditra.
· Sariaka ny tontolo iainana: Manala baraka ny akora polipropilena. Sariaka ny tontolo iainana.
Previous: Fametahana horonantsary mahavariana PP Spunbond Kodiarana tsy fanenona ho an'ny volon'antoka mitokana
Manaraka: Famandrihana Leno Scaffold